Laser sesibazi ukususwa
Phakathi nenqubo ukuphulukiswa iyiphi amanxeba ajulile esigabeni sokugcina Ukwakheka kwezitho izibazi. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwakheka okuphelele "abavuthiwe 'ka isibanda izicubu uyaqhubeka isikhathi esingangonyaka.
Zokwelapha, uhlukanise AMANXEBA ku normotroficheskie, hypertrophic futhi hypotrophic. isimo sokugembula - isibanda keloid - ochwepheshe kweqiniso e isigaba esithile. Kulokhu, izibazi hhayi kuphela abuzange bunciphe ngobukhulu, kodwa kunalokho, ezikhulayo, ukuthola isikhumba enempilo.
Izizathu eziyinhloko ekukhuleni ngokweqile isibanda izicubu zihlanganisa yofuzo, iziyaluyalu endocrine, kwehle isimo somzimba sokuzivikela ezifweni, kanye nabanye.
Izingxenye ezithile zomzimba womuntu babonakala bethambekele kakhulu hypertrophy. Lezi zihlanganisa emgqeni ephakathi nendawo, lezi sternum, evele elingaphandle emahlombe. Ngo ukwakheka yesibazi endaweni ngokuhlanganyela angagcina contractures (ukuhamba kungagcini). Ukuze ukuphulukisa rougher kuholela izimo ngokuvamile omubi. Kubandakanya emaphethelweni isilonda ukungezwani, ukuvuvukala, ukusha.
Laser sesibazi ukususwa ihlanganisa ubuchwepheshe abaqeqeshiwe kanye nobuchwepheshe ezintsha. Ngaphandle le ndlela, kunezinye izindlela sokulungisa isikhumba. Lezi zihlanganisa i-ultrasound, peels chemical, omsakazo yokwelapha. Ikhambi yokuphambana kuyakhethwa kuye ngobukhulu yesibazi, ubudala bakhe.
Akungabazeki Laser sesibazi ukususwa namuhla kubhekwe ngempumelelo kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi le ndlela inikeza umphumela khona izibazi nkomoni esiphezulu yimuphi umsuka. Modern laser isibanda ukususwa uyakwazi ukuqeda ngisho izimo ezinzima ezifana izibazi keloid. isici okunjalo esikhumbeni kungenzeka ukuba liphenduke izicubu evamile.
Namuhla, izibhedlela eziningi ezisetshenziswa wamaqhuzu laser isibanda ukususwa. Ngokusho odokotela kanye nochwepheshe, le ndlela iyona engcono kunazo zonke zemithi yanamuhla yobuhle. Laser ukususwa isetshenziswa khona nezibazi kusukela induna, izibazi ngakwesokunxele ngemva kokuhlinzwa, ukulimala. Ngaphezu kwalokho, le ndlela iphumelela kakhulu ukulungiswa isikhumba ukukhubazeka (striae, imibimbi).
Ngaphambili, isibanda ukususwa indlela yasetshenziselwa ablative laser ekubhujisweni. Phakathi naso sonke inqubo wathwalwa ukususwa kwamanzi isikhumba ungqimba. Lokhu laser ukwelashwa isibanda esikuwo uyinkimbinkimbi, kanti eliyifa layo kwakudingeka izinto zokubulala izinzwa. Ngaphezu kwalokho, isikhathi eside kakhulu futhi ephulukisa (cishe inyanga), futhi wayebuye abe ingozi okusezingeni eliphezulu izigigaba ezingezinhle.
Namuhla uma usebenzisa laser wamaqhuzu eyenziwa usayizi 1.5 mm isikhumba ukususwa ikholomu ukujula 0.3-0.4 mm ububanzi. zingxenyana ungenza awanele ukuhlawulela izono omunye isentimitha sikwele. Phakathi kwabo zigcinwa izingxenye zesikhumba njengoba yayinjalo. Lokhu kubangela ukuphulukiswa angabacwasi ngokushesha. Phakathi kungenzeka eyodwa yesimiso isuswe mayelana amaphesenti amabili isikhumba ebusweni kanjalo, bonke ubuso esikhundleni amaseshini emine kuya kwemihlanu.
Ngokuvamile, ukwelashwa laser sesimweni is kahle ikubekezelele iziguli. Okuningi liphinyiselwe ukuzwa endaweni ezizungeze amehlo ne lip engenhla.
isikhathi Ukwelashwa incike uhlobo nohlobo ukwephuka kuthi endaweni isikhumba kwakhiwa kuyo. Ngokwesilinganiso, inqubo ingahlala kusuka imizuzu eyishumi amane.
Ngaphambi ukuchayeka laser is hhayi Kunconywa amasonto amane, okungenani, bethamele ilanga (kubandakanya, solarium), futhi zisebenza kanjani imali yokwakha i tan yokufakelwa. Akufanele bathathe aspirin amasonto amabili ngaphambi kokwelashwa. Ukuze inqubo, isikhumba akufanele kube yimuphi izimonyo.
Indlela yokuqinisa ezitsheni
Abaholi kokuqukethwe yensimbi, noma eminye imikhiqizo ukwandisa elithwala umoya-mpilo
Lapho akhononde ngokuthi umtholampilo: izici isampula izikhalazo kanye nezincomo
Ukugobeka komhlandla. umzimba
Romanov zohlobo izimvu uboya nge Tint bluish
Intengo e Ukuhweba
TeamViewer. Indlela yokusebenzisa?
Simple ikhekhe recipe "ePrague" ubisi olujiyile
Indlela esiphatha ngayo ezishile kufanele wazi konke!
Ibhajethi travel: siya Belarus
Blade futhi Soul: iphutha 1073, izindlela zokuxazulula
Ifonetikisi - isayensi umsindo
Orange kubalulekile uwoyela: Izakhiwo kanye Izicelo